Miyey kooxda Chelsea si joogto ah ula wareegeysaa Gonzalo Higuain? – Gool FM
(London) 21 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo sheegayaa inaysan u badnayn inay si joogto ah kula wareegto Gonzalo Higuain.
The Blues ayaa lagu soo waramayaa inaysan hubin inay doonayso inay si joogta ah u wada iibsato Weeraryahanka amaahda kula jooga ee Gonzalo Higuain.
Juventus ayaa u ogolaatay weeraryahankan inuu 18-ka bilood ee soo aaddan uu amaah ku qaato garoonka Stamford Bridge, laakiin xiddiga reer Argentine ayaa kaliya dhaliyey saddex gool oo ka yimid 10 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Chelsea ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay dhammeystirto iibsashada 31-sano jirkaan, laakiin sida laga soo xigtay Tuttosport, Blues ayaa laga yaabaa inay raadiso bedel kale.
Wararka ayaa soo jeedinaya in labada suuq ee Chelsea suuqa ganaaxa laga saaray ay caddeyn karto inay dhibaato ku noqoto, Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaana la arkaa inay shaki ka qabto inay lacago badan ku bixiso laacib 32-jirsan doona dhammaadka sanadkan 2019.
Yeelkeede, Juventus ayaa la rumeysan yahay inay kalsooni ku qabto inay weli awood u leeyihiin inay helaan koox cusub oo doonaysa Higuain haddii uu dib ugu laabto Turin.